Kitra any Frantsa: hanatevina ny FC Fleury i Mario | NewsMada
Kitra any Frantsa: hanatevina ny FC Fleury i Mario
Araka ny vaovao hita tao anaty tambajotran-tserasera nivoaka omaly alatsinainy, voalaza fa handeha hanatevina ny ekipan’ny FC Fleury 91, any Frantsa, i Bakary Mario, vodilaharan’ny Fosa Jr Boeny teo aloha. Marihina fa efa nilalao tao amin’ny ekipan’ny Tampon, La Réunion, ny tovolahy ary nitana ny toeran’ny vodilaharana havia.
32 taona i Mario ankehitriny ary tena ao anatin’ny tanjany tanteraka. Miandry ny fandraisana azy amin’ny fomba ofisialy izany izao ny rehetra. Marihina fa mpilalao malagasy telo izany izao ny mandrafitra ity ekipan’ny FC Fleury 91 ity: i Njiva sy i Zotsara ary i Mario.
Izy ireo izay efa samy tao amin’ny Barea de Madagascar avokoa. I Zotsara sy i Njiva no mbola voatazona ao amin’izao fotoana izao fa tsy ao anatiny intsony kosa i Mario. Heverin’ny rehetra fa mbola manana ny toerany ao anaty ekipam-pirenena i Mario, indrindra fa amin’ny toerana sarotra itadiavana olona ny misy azy.
Tsiahivina fa efa nanazatra ity ekipa FC Fleury 91 ity i Nicolas Dupuis, saingy efa nametra-pialana noho izy voatendry ho tale teknika nasionaly sy mpanazatra ny Barea de Madagascar. Ekipa miatrika ny fifaninanana ao amin’ny “National 2” ny FC Fleury 91.